दुनियाँ च'कित् हुने चीनको चम'त्कार ! सार्वजनिक गर्यो अत्यन्तै तिब्र गतिमा कुद्ने यस्तो नयाँ रेल !China -
Home News दुनियाँ च’कित् हुने चीनको चम’त्कार ! सार्वजनिक गर्यो अत्यन्तै तिब्र गतिमा कुद्ने...
दुनियाँ च’कित् हुने चीनको चम’त्कार ! सार्वजनिक गर्यो अत्यन्तै तिब्र गतिमा कुद्ने यस्तो नयाँ रेल !China
देशभर प्रभाव पारेको जनयुद्ध त सकिएकै थियो। त्यसैले पनि सायद गाउँलेहरू खुसी थिए। त्यसपछि मुलुकमा संघीयता आयो। नयाँ व्यवस्थाअनुसार मुलुकभर स्थानीय सरकारहरू बने। गाउँगाउँमा बाटो बनाउने भन्दै स्थानीय सरकार अर्थात् गाउँ र नगरपालिकाहरू सक्रिय भए। गाउँमै सिंहदरबार पुगेपछि विकासको मुहान फुट्ने जनअपेक्षा बढ्यो। परिवर्तनको चाहना कसलाई हुँदैन र ? भित्तोपाखो हिँड्नेलाई सडकमा हिँड्न पाउनु अनि उत्पादन बजार पुर्‍याएर आम्दानी बढाउन पाउनु कसका लागि खुसीको खबर नहोला र ? राता डाँडाहरूमा साँघुरा र नागबेली सडक नै सही तर खनिए।
बाँदर लड्ने भित्ता खोपेर खनिएका ती सडकले विकासको मुहान फुटाउनुको सट्टा गाउँ नै उजाड बनाइदिए। गाई–भैंसी, बाख्रा र बाँझो बारी बेचेर गाउँलेहरू धमाधम सहरतिर ओरालो लाग्न थाले। कुनै बेला किसानले सुन फलाएको डाँडो अब पहिरोले रातै भएर नांगियो। साँझ–बिहान आँगनको डिलमा डुल्न आउने चराहरू बिस्तारै लोप हुँदै गए। वर्षौंअघि बार्दली निकालेर बनाएका घरका पिँढीमा झार पलाउन थाले। धुरी र पालीमा खर उम्रिन थाले। गाउँको बीचमा उकासेका चौताराहरू ढलेर लोप हुन भए।
Previous articleमुख्यमन्त्री माथी मानबधिकार र महिला आयोगमा उजुरी”म सङ्ग living together बस्ने अरु सङ्ग बिवहा गर्ने”
Next articleफेरि बाघको आ”क्रमण ; १ पुरुषलाई पि”साब फेर्न जाँदा तानेर लग्याे, खोजी कार्यमा ४ हात्ती प्रयाेग